Tag: ios ihe ngosi | Martech Zone
Tag: iOS prototype
Oge: Ezigbo Web, Mobile na Tablet Prototypes
Monday, September 23, 2013 Monday, September 23, 2013 Douglas Karr
Justintime Prototyper na-enye gị ohere iwulite websaịtị mmekọrịta, ekwentị mkpanaaka na mbadamba ihe ntanetị. Justintime Prototyper na-enyere aka ịmepụta mmegharị mmekọrịta na mmegharị ahụ na mmetụta dị ịtụnanya. Nwere ike ịmepụta ụdị ngwa a na-ebugharị data ma mepụta nkwado na-enweghị otu akara koodu. Lelee ihe atụ nke Prototyper na saịtị ha. Justintime Prototyper atụmatụ: Mobile Prototypes - Jiri obi ụtọ na-egosipụta ngwa mkpanaaka gị na ngwa dị ike mana ọ dị mfe iji mepụta mmegharị, ntụgharị, mmetụta na ọbụlagodi